Amaah Qaadashada Ganacsiga - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn Amaahda Qaadashada Ganacsiga
Amaahda iibsiga meheraddu waa meherado amaah ah, franchise ama kooxo adeegsada si ay uga iibsadaan meherad hore u jirtay hay'adaha diyaar u ah inay iibiyaan.
Amaahda wax iibsiga waxaa la raadiyaa marka shirkaddu rabto inay hesho hanti ama shirkad laakiin aan haysan raasumaal ku filan oo ay ku samayso. Deyntani waxay caawisaa taageeridda iyo maalgelinta iibsashada meheradaha ganacsiyada yaryar.
Uma baahnid inaad ka bilowdo halbeegga si aad u noqoto ganacsade. Iibsashada meherad jirta waxay ku siinaysaa fursad aad naftaada ugu shaqayso adigoon haysan dhammaan caqabadaha iyo halista bilowga.
Haddii aad hore ganacsi u lahayd iyo haddii kaleba, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iibsato shirkad jirta, si aad u ballaadhiso ama aad u noqoto ganacsade adiga oo aan ka bilaabin xididka.
NOOCYADA GANACSATADA OO HESHAY DEYNTA GANACSIGA GANACSIGA
Kobcinta/ ballaarinta meheradaha u baahan in lagu daro meherado cusub si dhaqso loogu koro
Iibsadayaasha tartanka: Inta badan shirkaduhu waxay go'aansadaan inay iibsadaan meherado u muuqda inay u korayaan si ay ugu noqdaan tartan adag. Waxay tan u sameeyaan si ay uga fogaadaan inay u koraan xoog ku filan si ay uga hormaraan mustaqbalka. Waxaa jira shirkado badan oo adduunka ah oo hadda tan tijaabiyay welina iibsanaaya tartamayaashooda maxalliga ah.
Shirkadaha laamiga ah oo raadinaya inay ku quustaan ​​dhulal/warshado cusub.
Akhri: Waa Maxay Amaahda PPP? Guudmarka, Iyo Sida Ay U Shaqeyso
MAXAA LOO BAAHAN YAHAY SI AAD U HESHO AQOONSI GANACSI GANACSI
Waa la ogyahay adiga iyo hay'ada amaahda ku siisa lacag taas oo "adiga iyo meheradda la helayo" ay labadooduba hore u jireen si madaxbannaan sidaas darteedna deyn -bixiyeyaashu waxay rabaan inay ogaadaan adiga iyo meheradda aad doonaysaan inaad marka hore iibsataan ka hor intaadan deynta bixin.
Waxa amaahiye kastaa rabo wuu kala duwanaan karaa, hase yeeshe, kuwani waa shuruudo guud oo kala duwan oo ay rabaan inay tixgeliyaan:
1. Sumcad shaqsiyeed oo wanaagsan
Shuruudaha amaahda iibsiga meheraddu waa kuwo adag maadaama ay qiimeynayaan qodobo kala duwan oo ay isticmaali karaan si ay u saadaaliyaan suurtogalnimada aad ku bixin karto amaahdaada ka dib qaadashada maalgelinta helitaanka ganacsiga.
Waa inaad haysataa dhibcaha dhibcaha ee 650 ama ka sii fiican oo aad la kulantid heerar kale.
Waa inaad ugu yaraan xaq u yeelataa dhibcaha amaahda shaqsiyeed ee wanaagsan laakiin haddii aadan haysan ilaa 650 dhibcood oo deyn ah, amaahda helitaanka ganacsiga yar -yar way adkaan kartaa inaad hesho markaad leedahay sumcad xun.
Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, dhowr waxyaalood oo aad samayn karto si aad u hagaajiso fursadahaaga oggolaanshaha.
Mid ka mid ah beddelka ayaa ah in la kordhiyo lacag -bixin weyn oo la socota dammaanaddaada ama dammaanadda shaqsiyeed. Waxaa laga yaabaa inaad hesho amaahiye diyaar u ah inuu aqbalo lacag -bixin hoose oo weyn iyadoon loo eegin dhibcahaaga.
Khatarta ah in la xuso markaad deyn qaadaneyso ayaa ah inaad lumin karto hantidaada haddii aad deynta iska bixin weydo, sidaa darteed waxaa muhiim ah in laga miisaamo halistaas dhanka wax -u -dhiska iyo amaahda amaahda iibsiga ganacsiga.
Dhibcahaaga ganacsiga ama dhibcaha amaahda shaqsiyeed waxaa si weyn loogu qeexay shan arrimood oo waaweyn:
Diiwaanka lacag -bixinta
Lacagaha lagu leeyahay
muddada taariikhda amaahda
Noocyada deynta la isticmaalo
2. Socodka lacagta caddaanka ah/ bayaanka dakhliga
Urur kasta oo ku siin doona amaah wuxuu marka hore rabaa inuu ogaado guulaha maalgashigaagii hore iyo haddii meheraddaada hadda jirta ay taageeri karto deynta oo meesha ka saari karto shakiga ay ka qabaan helitaanka ganacsigaaga.
Dabcan, ma jirto shirkad doonaysa inay khasaarto iyadoo maalgelinaysa qof dhaqaalaheedii hore ee maaliyadeed muujiyey inuusan awoodi karin inuu si guul leh u iibsado una maareeyo meherad.
Maadaama adiga lagaa dooni doono inaad bixiso lacag -bixin hoose, deeq -bixiyeyaasha amaahda iibsashada ganacsigu waxay rabaan inay hubiyaan inaad si ku filan u bixin karto lacag -bixinta hore.
XIDHIIDHKA: 20 Amaah Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican ee Ardayda 2022
3. Qorshe ganacsi oo heer sare ah
Xaalad uu nin kugu soo socdo oo kaa codsado inaad lacag deynsato adiga oo aan lahayn qorshe cad oo lacag ah, hubaal, ma doonaysid inaad amaahatid. Isla sidaas oo kale ayay u tahay deyn -bixiyayaasha.
Amaah-bixiyuhu kuma siin doono deyn adiga oo aan lahayn qorshe si fiican looga fikiray oo suurtogal ah oo lagu kaydiyo xog la xaqiijin karo.
Waxaad u badan tahay inaad u keento qorshe ganacsi oo dhammaystiran ganacsigaaga cusub oo sharraxaya taariikhda istiraatiijiyaddii ugu dambaysay ee meheraddaada, qorshayaasha laga yaabo inaad leedahay inaad isbeddel ku samayso ama aad ku kordhiso qiimo mustaqbalka, iyo qorshe kor loogu qaadayo istaraatiijiyaddaada cusub.
Waa inaad xusuusataa qorshayaasha ugu yaraan labada sano ee soo socota.
4. Warbixinta Maaliyadeed ee Guud
Waxaa lagaaga baahan doonaa dhowr macluumaad maaliyadeed oo kale sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka hubiso amaahiyahaaga si aad u ogaato nooca macluumaadka loo baahan yahay in la soo gudbiyo.
Si kastaba ha noqotee, amaah -bixiyeyaasha badankood waxay sidoo kale codsadaan bayaannada bangigaaga, bayaannada dakhliga, iyo soo -celinta canshuurta ganacsiga iyo shaqsiyeed si loo caddeeyo dakhliga iyo ilaha ganacsigaaga.
Waa inaad sidoo kale bixisaa macluumaad isku mid ah (ama inta aad karto) ganacsiga aad iibsaneyso.
5. Warqad ujeedo ah oo saxeexan
Halkee Ayaan Ka Heli Karaa Amaah Qaadashada Ganacsi?
Marka la go'aaminayo in la iibsado meherad ama maalgashi jira, hal qodob oo muhiim ah in la tixgeliyo ayaa ah halka ay maalgalintu ka iman doonto.
Xagee baan ka heli karaa amaahda, maxay noqon doontaa muddada amaahda iyo su'aalo kale oo kala duwan ayaa ku soo dhici doona maskaxda iibsadaha oo marka laga reebo inaad hore u haysatay lacag aad u badan oo la kaydiyey, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso 4 -ta ilood ee ganacsiga amaahda iibsiga.
1. DEYNTA BANKA
Mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhici doona markaad qorsheyneyso inaad hesho amaah shaqsiyeed ama ganacsi waa bangi. Warka fiicani waa bangiyada badankoodu waxay leeyihiin qodobo gaar ah oo loo qoondeeyay iibsiga ganacsiga.
Bangigu wuxuu baari doonaa aqoonsiyadaada, dhaqaalaha meheradda aad rabto inaad hesho, iyo macluumaadka la xiriira iibsigaaga ganacsi ee la beegsaday oo ka duwan ilaha kale ee amaahda helitaanka ganacsiga oo leh borotokoollo adag.
Waa inaad sidoo kale ogaataa tan, bangiga beesha maxalliga ah ama ururka amaahda ayaa laga yaabaa inay mas'uul ka yihiin inay ku ansixiyaan marka loo eego hay'ad weyn oo bangiyada waddanka oo dhan ah.
Kuwa soo socda ayaa ah siddeed shay oo ka mid ah waxyaabaha uu bangigu codsan doono ka hor inta uusan ku siin deyn ganacsi:
8 WAXYAABAHA BANGIGAADU WEYDIISAN DOONAAN INUU KU SIIYO Deynta AQOONSIGA GANACSIGA
Qorshe ganacsi oo wanaagsan
Qoraalka maaliyadeed ee la hubiyay
Qoraalka canshuurta shaqsiyeed iyo ganacsi
Taariikhda amaahda iyo deymihii hore iyo kuwa hadda.
Soo -celinta maaliyadeed ee shaqsiyeed.
2. DEYNTA SBA
Meel kale oo lagu helo amaahda iibsiga ganacsiga waa iyada oo loo marayo amaahda SBA. SBA si toos ah lacag kuuguma deymeyso ee waxay kuu celineysaa hay'adda ku siisay deynta.
SBA-du waxay dejisaa habab deymo ah oo ay sameeyaan deyman-bixiyeyaasheeda la-hawlgalayaasha ah iyo hay'adaha amaahinta yar-yar iyo sidoo kale waxay siisaa dammaanad qaadka iyo heerarka badbaadada amaah-bixiyeyaasha, gaar ahaan bangiyada kuwaas oo, iyaguna, amaahin kara lacag si ay u maalgeliyaan iibsiga.
SBA lacag toos uma siiso milkiilayaasha meheradaha.
U -qalmitaanka amaahda SBA waxay ku saleysan tahay waxa ganacsigu sameeyo si uu u helo dakhligiisa, dabeecadda lahaanshihiisa, iyo meesha meheraddu ka shaqayso.
XIDHIIDHKA: Dib u eegida Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart 2022
3. Deyn -qaateyaasha gaarka ah
Amaahda laga helo deyn-bixiyayaasha gaarka loo leeyahay ayaa caadi ahaan ah amaah aan bangi ahayn. Waa deymo laga helo shaqsiyaad gaar ah, ilaha internetka, saaxiibbo hodan ah ama walaalo, ama ilo kasta oo aan ku jirin bangi.
Kahor intaadan ku soo gabagabayn amaahda laga helay amaahiyaha gaarka loo leeyahay, hubi in shuruudduhu yihiin kuwo wanaagsan oo ay kuu fududaan doonto inaad u hoggaansanto.
Deyn -bixiye kasta oo gaar ah wuxuu leeyahay shuruudo iyo shuruudo sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad la xiriirto amaahiyaha gaarka ah si aad u ogaato waxa loo baahan yahay.
Deyntaani ma daboosho iibsashada meherad cusub. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo xusid u leh maalgelinta qalabka, tusaale ahaan helidda deyn lagu iibsado qalab ama qalab ijaarasho.
Haddii aad dareensan tahay in qiimaha qalabku uu noqon doono mid aad qaali u ah in dib loo bixiyo, waxaad beddeli kartaa aaladda.
Akhri: Waa Maxay Waajibaadka Amaahda Damaanad -qaadka ah? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
SHURUUDAHA MAALIYADDA QALABKA
WAXYAABAHA IYO QIIMAHA GANACSIGA GANACSIGA GANACSIGA
Su'aasha inta badan maskaxda ku haysa dadka ayaa ah "ma lagugula talinayaa inaad hesho deyn ganacsi", gaar ahaan xaaladaha aad weli shaki ka qabto guusha mustaqbalka ee ganacsiga la helayo.
Tallaabada ugu horreysa ee la qaadayo ka hor inta aan la bilaabin hawl ganacsi ama la go'aansan in la helo deyn si loo helo meherad jirta waa in la miisaamo faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka oo la arko haddii ay faa'iido u leedahay in lagu quuso.
Amaah kasbashada ganacsigu waa nafis iyo sidoo kale xal waqti dheer ah inta lagu jiro bilowga/bilowga ganacsiga.
Waxay u oggolaanaysaa ballaarinta oo aan suurtogal ka ahayn sanduuqa shirkadda.
Akhri: Waa maxay Softloan- Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Dulsaarka/dulsaarka: hal qasaaro oo muuqata oo ah amaahda iibsiga ganacsigu waa dulsaarka u baahan in la bixiyo. Xaaladaha deymaha waaweyn, dulsaarka ayaa badanaaba aad u weyn. Heerarka dulsaarka waxay taagan yihiin ilaa 10 boqolkiiba, in kasta oo ay jiraan qaddar la taaban karo oo kala duwan oo ku saleysan amaahiyeyaasha.
Shuruudaha u -qalmitaanka: Si aad xaq ugu yeelatid inaad hesho amaah iibsi ganacsi ma aha hawl fudud. Ma jiro dayn -bixiye doonaya inuu lacagtooda gacanta u geliyo qof aan waayo -arag ahayn, oo aan dhammaystirnayn sidaas darteedna shuruudaha u -qalmidda inta badan way adag yihiin.
Waxaa dhici karta in aad qaadato deymo aad u badan, gaar ahaan haddii aad hore u lahayd deymo aad u badan.
Su'aalaha la isweydiiyo (SU'AALAHA BADAN LA ISWAYDIIYO) DAYmaha GANACSIGA GANACSIGA
WAXYAABAHA LA SAMEEYO INTA AAN IYAGU GADAN GANACSI JIRA
Waxaa jira arrimo kala duwan oo laga yaabo inaad rabto inaad tixgeliso ka hor intaadan helin ganacsi jira. Qaarkood waa
1. Hubi inaad leedahay qorshe ganacsi oo wanaagsan
2. Waa inaad hubisaa inaad haysato lacag/maalgelin kugu filan oo aad ku daboosho iibsiga iyo sidoo kale maalgelin u baahan doonta inaad sii waddo daboolidda kharashaadka ganacsiga.
3. Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad codsato inaad aragto ganacsiga hadda jira maaliyadeed, sharci, iyo dukumiintiyo kale oo muhiim ah oo ay ku jiraan dacwadaha la sugayo, diiwaanada canshuuraha, bayaannada bangiga, iwm.
4. Waxaa aad loogu talinayaa inaad shaqaaleysiiso koox rasmi ah oo ka kooban dillaal, bangi, xisaabiye, iyo qareen.
5. Ogow sababta aad u rabto inaad u iibsato meheradda iyo haddii ay adkaan doonto inaad ku milmaan meheraddaada hadda.
XIDHIIDHKA: Amaahda Ganacsiga Yaryar 2022 Taas oo Ku habboon Ganacsigaaga
WAA KHAYRAADKA SIDA LOO SAMEEYAY OO KELIYA OO HESHIYA DAYMAHA GANACSIGA?
Maya, Shirkaddaadu qasab ma aha inay noqoto shirkad dhisan si ay awood ugu yeelato inay hesho amaahda iibsiga ganacsiga. Inta badan shirkadaha sida fiican u koray hadda waxay fursad u heleen inay helaan meheradaha ku habboon waqtiga saxda ah iyo goor hore. Deyn -bixiyeyaashu waxay fahmaan in meherad kastaa ka bilaabanto ganacsi yar ilaa si buuxda loo horumariyo. Si kastaba ha ahaatee waa inaad ogaataa inay aad u adag tahay inaad hesho deyn iibsi ganacsi sida shirkad yar marka la barbar dhigo inaad tahay shirkad weyn.
WAA INAAN HAYSAA QORSHE GANACSI SI AAN U HELO DEYN SBA
Haa, waa inaad Qorshe ganacsi la'aan, SBA ma oggolaan doonto ama xitaa aqoonsan doonto codsigaaga amaahda. Qorshe ganacsi oo si fiican loo qorsheeyey ayaa ka mid ah dukumentiyada looga baahan yahay codsiga amaahda SBA.
DIIWAANKEYGA DAMBIGA MA IGA JOOJIN KARAA INAAN HELO SAN -SBA AAN HELI KARO SHURUUDAHA OO DHAN?
SBA ma qabato xukunno hore oo qof lagu xukumay. Hase yeeshee, SBA waxay ka reebaysaa ganacsi kasta oo leh maamule ku jira tijaabo, sii -dayn sharafeed, ama qaab kormeer oo la mid ah; ama yaa hadda wajahaya wax dacwad ah.
Siyaasadaha SBA waxay caddeeyaan in tan ay ka mid tahay qof ku hoos jira dacwad -qaadis dib -u -dhigis ah, siidayn shuruudaysan, amar ilaalin, ama diiwaanka dembiilaha galmada, iyo sidoo kale qof kasta oo “hadda lagu soo oogay dacwad, macluumaad dembiyeed, maxkamad, ama qaabab kale oo dembiile rasmi ah dacwadaha waxaa la keenaa awood kasta. ”
Waxaa laga yaabaa inaad ka sii akhrido tan tan bogga SBA.
Jinsigaygu ma saamayn doonaa kartidayda si aan u helo DAYN GANACSI GANACSI?
Dabcan maya, Jinsigaagu waxba kuma laha haddii aad deyn qaadanayso iyo in kale. Dheddig iyo haddii kaleba, inta aad haysato dhibco amaah iyo sumcad wanaagsan, qorshe ganacsi oo wanaagsan, dukumentiyada maaliyadeed ee saxda ah, iyo dhowr shuruudood oo kale, waad ku fiicantahay inaad tagto.
In kasta oo haweenku ay ku adkaan karto inay booskooda ka helaan adduunka ganacsiga, haddana ma xaddiddo fursadaha ay ku heli karaan amaahda. (dalal aan ku fikirin dumarka).
Iyadoo helitaanka amaahda ganacsigu ay u ekaan karto waxa soo socda ee la sameeyo, hubi inaad si fiican u miisaamayso faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka, is barbar dhig heerarka iyo shuruudaha lacag bixinta, iyo inaad awoodi doonto inaad buuxiso shuruudaha.
Waxa kale oo jira habab kale oo lagu maalgeliyo iibsashada meheradda oo ay weheliso amaahda SBA, amaahda bangiga, maalgelinta qalabka iwm.
Qaar ka mid ah kuwaas oo amaah ka helaya qaraabada, asxaabta, iyo walaalaha, Sanduuqa shirkadda, shirkadda Sinnaanta, kasbashada, iibsashada leveraged, iwm.
Ogow marka aad iibsaneyso ganacsi cusub, waa inaad sidoo kale ogaataa inta loo baahan doono si loo socodsiiyo kadib markii la iibsaday.
Qaabka iyo Nuxurka Cilmi-baadhista oo kooban
Amaahda Shakhsiyeed ee Upstart: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Haddii aad waligaa u baahan tahay inaad amaahato qaddar lacag ah ama aad leedahay taariikh amaaheed xaddidan haddii…
Ma ogtahay cafiska deynta PPP? Asal ahaan, maqaalkani wuxuu sharxi doonaa inay jiraan wax ku saabsan iyo faahfaahinta…
Waa maxay Barnaamijka Amaahda Waxbarashada Qoyska ee Federaalka? Sida ay u shaqayso, faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Tan iyo markii ay korodhay waxbarashada kuleejka, arday badan ayaa hadda deynta lagu leeyahay in ka badan weligood. Si looga fogaado halganka…